Cabdiraxmaan Cabdishakuur ” madaxweyne Farmaajo waxaa ka muuqda cabsi nafsi ah iyo shaki badan.” - Awdinle Online
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ” madaxweyne Farmaajo waxaa ka muuqda cabsi nafsi ah iyo shaki badan.”
December 24, 2019 (Awdinle Online)–Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uu dareemayo nafsi ah iyo shaki badan,wuxuuna war been ah ku sheegay in xaalka hadda taagan lagu qaban karo doorasho qof iyo cod ah.
Wuxuu sheegay in xarunta Madaxtooyada Villa Somalia lagu horgooyay Laamiyeyaal askar Jiifta ah,sidoo kalena lagu xiray isbaarooyin qufullo leh, waxaa laga mamnuucay shacabka, masuuliyiintii kale ee Dowladda in ay ciidan lasoo galaan ama la agmaraan iyagana waa laga joojiyay.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa cadeeyay in amniga dalka uusan hagaagsaneyn,islamarkaana Dowladda Farmaajo ay ku fashilantay istiraatijiyadeeda ee sugida amniga dalka.
Halkaan Hoose ka Akhriso qoraalka CC Shakuur:-
Madaxwaynuhu waa taliyaha ciidanka qalabka sida. Waa in awooddiisa hoggaan uu inta kale tusaale ugu noqdo dhinaca dhiirranaanta, naf hurka, geesinnimada iyo tawaaduca.
Villa Somalia waxaa lagu horgooyey laamiyaal askar jiifta ah, waxaa lagu xiray isbaarooyin qufullo leh, waxaa laga mamnuucay shacabka, masuuliyiintii kale ee Dowladda in ay ciidan lasoo galaan ama la agmaraan iyagana waa laga joojiyay.
Madaxwaynuhu wuu ka baaqday xuska maalinta Booliska Soomaaliyeed, maantana halkii uu tegi lahaa wasaaradda Qorshaynta ayuu madaxtooyada qaybta deeganka ah isugu yeeray inta badan Golihii Wasiirrada si uu uga hadlo xaflad lagu daahfurayey qorshaha qaranka. Waxaa ka sii daran in uu roog cas fidsaday inta u dhaxaysa hoygiisa iyo saalada fadhigga martida oo 6 mitir isku jira.
Madaxwaynaha waxaa ka muuqda cabsi nafsi ah iyo shaki badan. Waxaase fajaciso kale ah in goobtaas laga leeyahay doorasho qof iyo cod ah ayaan dalka ka qabanaynaa.
Ruux cabsi iyo baqdin intaa la egi hayso, kuwa agjoogana ay u sacaba tumayaan, runtana aysan kula dhiirran karin, ma kula tahay in ay sidan hoggaan ugu sii ahaan karaan dal la doonayo in cadaw argagexiso laga xoreeyo, dadkiisana colaad sokeeye laga saaro?
Previous articleDuqeyn Ka Dhacday Jubbada Dhexe & Xubno muhiim ah oo lagu diilay
Next articleXiisad Maanta Ka Taagan Magaalada Baardheere ee gobolka Gedo